Accueil > Gazetin'ny nosy > Ady tany eny Fenoarivo : Miziriziry amin’ny lainga marivo tototra Raholdina
Tsy reraka mitety haino aman-jery amin’ny fiarovana ireo olona roa mianadahy nampidirina am-ponja vonjimaika noho ilay raharaha ady tany eny amin’ny kaominina Fenoarivo, distrikan’Antananarivo Atsimondrano ny depiote IRD voafidy teny amin’ny firaisana faha-5, Naivo Raholdina na i Betaintsofina. Tamin’ny faramparan’ny herinandro teo mantsy dia niakatra “plateau” nandoa volabe tao amin’ny televizionina TV Plus Madagascar sy Real TV indray ity depiote ity. Mbola niaro mafy ireo mpianadahy migadra vonjimaika eny Antanimora ny tenany tao anatin’ny fandaharana, fa tamin’ny ankapobeany dia fanaratsiana sy fanenjehana ny La Gazette de la Grande île no nataony.
Naverimberin’i Naivo Raholdina foana ny hoe mpandainga ny gazety rehefa miresaka ilay raharaha ady tany eny Fenoarivo kanefa araka ny lahatsoratra nivoaka tato amin’ny La Gazette de la Grande île, ny talata 12 oktobra lasa teo, dia ity solombavambahoaka ity mihintsy no tsy menatra ny mandainga noho ny fiarovana an-jambany ireo namany any am-ponja. Miziriziry amin’ny lainga marivo tototra i Betaintsofina ary didim-pitsarana efa tsy manan-kery intsony no asehoany sy arantirantiny rehefa mihakatra haino aman-jery ny tenany. Tsy menatra mihintsy ingahy depiote milaza fa olona dôkera tsy misy dikany eny amin’ny faritr’itaosy ilay olona nitory ireo mpianadahy naiditra am-ponja vonjimaika fa tsy mpandova tany akory, kanefa araka ny didy navoakan’ny fitsarana izay mitondra ny laharana faha-005 tamin’ny 03 janoary 2017, dia tena mpandova io olona nitory io, ary tsy manan-kery intsony ilay didim-pitsarana mitondra ny laharana faha-241 tamin’ny 13 desambra 1960 izay arantirantin’i Naivo Raholdina ao anaty haino aman-jery.
Averina etoana fa raha manana ny rariny ireo mianadahy naman’i Betaintsofina voampanga ho nanao fivadiham-pitokisana, dia tsy nampidirina am-ponja vonjimaika mihintsy. Marihana fa andro vitsy lasa izao no niakatra fitsarana voalohany tetsy Anosy ity raharaha ady tany eny Fenoarivo ity ka tarian’izay dia mbola naverina eny Antanimora ireo mpianadahy naman-dRaholdina na dia nangataka fahafahana vonjimaika aza ny mpisolovavan’izy ireo. Izany no manaporofo fa tsy manana ny rariny mihintsy izy ireo na mihezaka mafy manadio azy ireo aza i Betaintsofina.